किन लड्दैछन् आदिवासीहरु ? - Sainokhabar
होमपेज / विचार / किन लड्दैछन् आदिवासीहरु ?
किन लड्दैछन् आदिवासीहरु ?
सोमबार, असार ०२, २०७६ , साइनो खबर
भूपेन्द्र खुदाङ लिम्बू
लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा ९ हजार १६१ सिट खुलाएको छ । यति ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्दै गर्दा आरक्षणतर्फ थोरैमात्र सिट छुटयाइएको छ । यसको हाल आरक्षणमा पर्ने महिला, दलित बाहेक सबैले विरोध जनाइरहेको छ । एउटा उदाहरण अधिकृत पदको लागि कुल ५७५ सीटका लागि विज्ञापन गरिएको छ । यो माग तथ्याङ्कलाई देशभरलाई एक युनिट मानेको भए ५७५ को ५५ प्रतिशत (३१६ सीट) खुलातर्फ जान्थ्यो र ४५ प्रतिशत (२५९ सीट) आरक्षण तर्फ जान्थ्यो । तर, त्यसो नगरेर स्थानीय तहहरुलाई छुट्टाछुट्टै इकाई मान्दा खुलातर्फ ४७४ र आरक्षणतर्फ केबल १११ सीट बनाइयो । यस्तै महिलाले ८५ सीट पाउनुपर्नेमा ७५ सीट पाएको छ । आदिवासी जनजातिले ७० सीट पाउनुपर्नेमा केबल १४ र मधेसीले ५७ सीट पाउनुपर्नेमा १२ सीट पाएको छ । दलितले २३ पाउनुपर्नेमा ५ सीट, आपाङ्गले १३ पाउनुपर्नेमा ३ र पिछडिएको क्षेत्रले १० पाउनुपर्नेमा केबल २ सीट पाएको छ । यो अधिकृतको मात्र आँकडा हो । अधिकृत बाहेक साहयक लगायत विभिन्न तहहरु खुलाएको छ । त्यसको आँकडा यस्तै अझ ठूलो खाडल छ ।
एउटा उदाहरण हेरौँ ः यीनीहरुले नै जारी गरेको संविधानले नचिनेको मेची अञ्चलमा पर्ने जिल्लाका सबै स्थानीय तहका लागि इलाम कार्यालयबाट विज्ञापन गरेको छ । सामान्य प्रशासनतर्फ अधिकृतका लागि इलाम शाखाको नाममा गरिएको विज्ञापनमा २० जना अधिकृतका लागि विज्ञापन गरिएको छ । तर, समावेशीमा एक जना मात्र महिला सिट छ । बाँकीलाई शुन्य । त्यही समूहअन्तर्गत सहायक पदमा ११२ जनाका लागि विज्ञापन गरेको छ तर, समावेशीतर्फ महिलालाई ३० र आदिवासी जनजातिलाई तीन सिट छुटयाइएको छ । मधेसी, दलित, आपागं, पिछडिएको क्षेत्रलाई छैन । हुनुपर्ने के थियो भने २० अधिकृतलाई कुल संख्या मान्ने हो भने ५५ प्रतिशत अर्थात ११ खुला र ४५ प्रतिशत अर्थात ९ जना आरक्षणतर्फबाट आउनुपर्ने थियो । त्यसपछि ९ जनालाई शतप्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्र क्लस्टरमा वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर यहाँ लोकसेवाले एक जनामात्र आरक्षणतर्फ राख्यो । किनभने उसले यहाँ अञ्चललाई इकाई मानेन । स्थानीय तहलाई इकाई मान्यो । धेरै तहहरुमा एक वा दुई जना अधिकृत चाहिने भएकाले आरक्षण दिनु परेन । तर, विज्ञापन गर्दा अञ्चलभरीका सबैलाई जोडेर कुल सिटको माग्नु पर्ने थियो । यहाँ गरेको सबैभन्दा ठूलो षड्यन्त्र यही हो । सबै स्थानीय तहबाट कुनै खास पद र समूहमा आएको सम्पूर्ण सीटलाई एउटा कलस्टरमा राखेर विज्ञापन गरेको भए आरक्षणतर्फ सीट संख्या बढने थियो । संविधानको मर्मले भनेको पनि यही हो ।
प्रसंगको व्यक्ति नरेश रेग्मीको कुरा ः
¬(आरक्षण ब्राह्मणहरुले पनि पाएकै हुन् । पढ्ने आरक्षण । यो देशमा सबैले पढ्ने आरक्षण कहाँ पाए र रु ब्राह्मणहरुले वेद पढे । पुराण पढे । कर्मकाण्ड पढे र कर्मकाण्ड गरे । दलितहरुले वेद पढ्न खोज्दा जिब्रो काटियो । सैयौँ वर्षको यही आरक्षणमा टेकेर ब्राह्मणहरु आज क्षमताको बहस गर्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन् ।
सदियौँदेखि राज्यको सेवा, सुविधाबाट बन्चित साथै राज्य संयन्त्रमा पहुँच राख्न नसक्ने आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्ग र पिछाडिएको क्षेत्रको राज्यमा सम्मान पहुँच निर्माण होस् । राज्यको मुलधारमा जोडिन्न सकुन् भनी संविधानले परिकल्पना र व्याख्या गर्यो । तर यतिबेला संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको लोकसेवा र सरकारको साँठगाँठ निकै फ्युजन भएर गुलाबी देखिन्दैछ । आदिवासी जनजाति, मधेशी युवाहरुलाई रेमिट्यान्स कमाउनु पठाउने नीति बनाउने सरकारले बाहुन युवाहरुलाई सरकारी संयन्त्रमा व्यवस्था गर्ने काइदाको विज्ञापन सेटिङ गरेको छ । जहाँ बाहुन छिर्ने अरु हेर्ने ।
संविधान नै हाम्रो पक्षमा छैन् । तर तिमीहरुले नै जे भनेर जारी गर्यौँ, त्यो त पूरा गर । हाम्रो लडाइँ व्यवस्थाको विरुद्ध हो । संविधानप्रदत्त आरक्षण व्यवस्था गर । हामीलाई थाहा भएकै हो खुल्ला पूरै १०० प्रतिशत बाहुन सिट हो । तर आरक्षणको कोटा त सुनिश्चित गर । कम्तिमा आदिवासी युवाहरुले पनि राज्य संयन्त्रमा जोडिन्न सकुन् । देशमै केही गर्ने हिम्मत गर्न सकुन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको बाहुन
सरकार, बाहुन कर्मचारी अरु बाल छैन् भन्या हो ?